ကတုံးပြောင်တွေက ယောက်ျားပိုပီသပြီး ဥာဏ်ပိုကောင်းကြသတဲ့
ကတုံးပြောင်တွေက ယောက်ျားပိုပီသပြီး ဥာဏ်ကောင်းကြသတဲ့
28 Aug 2017 . 11:39 AM
၂ဝ၁၂ခုနှစ်မှာ ပန်ဆိုဗေးနီးယားတက္ကသိုလ် (University of Pennsylvania) မှ ပါမောက္ခ အဲဘတ်အီး မန်းနက်စ် (Albert E. Mannes) ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ ဆံပင်ပါတဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ ကတုံးပြောင်ပုံ (၅၉) ပုံကို ပြသပြီး သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကတုံးပြောင်တဲ့လူတွေဟာ အောင်မြင်ပုံပေါက်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုပိုရှိစေပါတယ်။ နဂိုအသက်အရွယ်ထက် ပိုမိုနုနယ်တဲ့ပုံပေါက်ပြီး ယောက်ျားပိုပီသစေပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အရပ်နိမ့်ရင်တောင် မိမိအရပ်မောင်းကို ပတ်ဝန်းကျင် သတိမထားမိစေပါဘူး။
မန်းစီးတီးနည်းပြ ဂွာဒီယိုလာ (Guardiola)
ဂျာမဏီနိုင်ငံမှ ဆာလမ်းတက္ကသိုလ် (University of Saarland) ရဲ့သုတေသနအရ ကတုံးပြောင်တွေရဲ့ဇနီးမယားတွေဟာလည်း ပုံမှန်အသက်အရွယ်ထက် ပိုပြီး နုပျိုငယ်ရွယ်ပုံပေါက်တယ်ဆိုတာ လေ့လာသိရပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကတုံးပြောင်ဆိုတာ ခေါင်းမှာ ဆံပင်လုံးဝမပါတဲ့သူကို ဆိုလိုတာပါ။ ခေါင်းတစ်ခုလုံး မပြောင်ဘဲ ဆံပင်ကျဲကျဲ ပေါက်တဲ့သူတွေကျတော့ ဆွဲဆောင်မှုအားနည်းပြီး သူတစ်ပါးအထင်သေးဖွယ်ဖြစ်တတ်တယ်လို့ သုတေသနအရ သိရပြန်ပါတယ်။ ကဲ . . . ဒီလောက်ဆို ပြောင်သလင်းခါအောင် ရိတ်သင့်ပြီထင်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ။
၂ဝ၁၂ခုနှဈမှာ ပနျဆိုဗေးနီးယားတက်ကသိုလျ (University of Pennsylvania) မှ ပါမောက်ခ အဲဘတျအီး မနျးနကျဈ (Albert E. Mannes) ဦးဆောငျတဲ့အဖှဲ့ဟာ ဆံပငျပါတဲ့ရုပျပုံနဲ့ ကတုံးပွောငျပုံ (၅၉) ပုံကို ပွသပွီး သုတသေနပွုလုပျခဲ့ကွပါတယျ။ ကတုံးပွောငျတဲ့လူတှဟော အောငျမွငျပုံပေါကျပွီး မိမိကိုယျကို ယုံကွညျမှုပိုရှိစပေါတယျ။ နဂိုအသကျအရှယျထကျ ပိုမိုနုနယျတဲ့ပုံပေါကျပွီး ယောကျြားပိုပီသစပေါတယျ။ နောကျပွီးတော့ အရပျနိမျ့ရငျတောငျ မိမိအရပျမောငျးကို ပတျဝနျးကငျြ သတိမထားမိစပေါဘူး။
မနျးစီးတီးနညျးပွ ဂှာဒီယိုလာ (Guardiola)
ဂြာမဏီနိုငျငံမှ ဆာလမျးတက်ကသိုလျ (University of Saarland) ရဲ့သုတသေနအရ ကတုံးပွောငျတှရေဲ့ဇနီးမယားတှဟောလညျး ပုံမှနျအသကျအရှယျထကျ ပိုပွီး နုပြိုငယျရှယျပုံပေါကျတယျဆိုတာ လလေ့ာသိရပွနျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကတုံးပွောငျဆိုတာ ခေါငျးမှာ ဆံပငျလုံးဝမပါတဲ့သူကို ဆိုလိုတာပါ။ ခေါငျးတဈခုလုံး မပွောငျဘဲ ဆံပငျကြဲကြဲ ပေါကျတဲ့သူတှကေတြော့ ဆှဲဆောငျမှုအားနညျးပွီး သူတဈပါးအထငျသေးဖှယျဖွဈတတျတယျလို့ သုတသေနအရ သိရပွနျပါတယျ။ ကဲ . . . ဒီလောကျဆို ပွောငျသလငျးခါအောငျ ရိတျသငျ့ပွီထငျပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ။